Chitatu, Kurume 16, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Wese munhu arikutsvaga nzira dzekuwedzera zvizere zvemukati, iyo Martech Zone hazvina kumbosiyana. Vazhinji vevaverengi vako vanoverenga zvemukati uye vobva vakopa nekunamatira snippets kuti vatumire pamwe kune vamwe kana kuzviisa mune zvavo zvavanotumira. Tynt ibasa raunokwanisa kupinza zviri nyore iro rinoona iro kopi uye rinowedzera yako URL kune zvemukati zvakateedzerwa. Paunonama zvemukati kumwe kunhu… voilà… zvemukati zvinonamirwa pamwe chete neiyi link back kune yako saiti.
Heino vhidhiyo yakanaka inotsanangura basa raTynt:
Tynt inotaura kune simba rechikwata maererano neSEO. Kana mumwe munhu akafambisa zvemukati uye achitsikisa, iwe une yakanaka chinongedzo kudzokera kune yako saiti. Ini ndinofunga izvi zvakanaka - asi ini ndiri kunyatsoona kukosha kwekuti chinongedzo chinopihwa kuti vaverengi vadzvanye mumaemail uye nedzimwe nzvimbo.
Mumwedzi wapfuura, Tynt aona kuti zvinyorwa zvangu zvakateedzerwa ka703, uye nhamba yakazouya yevashanyi yaive 4. Anowedzerana mazana matatu nemakumi matatu nematanhatu maumbirwo matsva akagadzirwa zvemukati - muvatengi veemail, mabharani ekushandisa, nezvimwe zvinyorwa (kwete zvese kubatsirwa kweSEO… asi pamwe mashoma!). Aya matanho haana kukwana kuti aende pamusoro, asi zvakawanda zveiri nyore basa. Pashoma, ndinoda chokwadi chekuti ndiri kuwana kiredhiti vanhu pavanoteedzera zvemukati mangu uye vozvitumira kunetiweki yavo.
Tynt zvakare inopa kumwe kurondedzerwa kwakadzama pane izvo zvemukati zvakateedzerwa nekunamirwa - izvi zvinogona kuve zvakakosha sezvo iwe uchitanga kutsvaga izvo zvemukati pane yako saiti inozivikanwa. Zviedze pachako - kuteedzera zvimwe zvemukati kubva iyi posvo uye kuteedzera iyo muemail.
Imwe tsamba yekupedzisira… handikwanise kurangarira kuti ndakawana sei Tynt… asi ndine chokwadi chekuti imwe yeshamwari dzangu kana vaverengi vakandiudza nezvazvo ndikakanganwa kuti ndiani! Dai wanga uri iwe ... ndizivise uye ini ndichagadzirisa ino posvo neimwe kiredhiti.
Kushambadzira Idea: Imwe-Dzvanya Chiitiko Kunyoresa
Mar 17, 2011 pa 6: 02 PM
Inogona here iyo link kuenda kune yeYouTube vhidhiyo futi? Izvi zvinobatsira here vhidhiyo kukwira kumusoro mukutsvaga?